War-murtiyeed ka kooban 10 qodob oo ka soo baxay shirkii madaxda federaalka uga socday Uganda. – Radio Daljir
War-murtiyeed ka kooban 10 qodob oo ka soo baxay shirkii madaxda federaalka uga socday Uganda.
Kampala, June, 09 – War-murtiyeedkaan hoose waxaa uu soo baxay ka dib shir maalmo qaatay oo ka socday Uganda, kaas oo mar qarka u fuulay in lagu kale dareero.
3- Iyadoo uu tixgelinayo baahida loo qabo habsami u socodka shaqada wanaagsan ee xukuumaddu hayso iyo in laga gudbo khilaafaadka soo dhexgalay Baarlamaanka iyo Xukuumadda, waxaa raisulwasaaruhu go?aansaday in uu dalka gudihiisa shaqada iskaga casilo soddon maalmood gudohood.
4- Laga bilaabo maalinta heshiiska la saxiixo isla sodonkaa cisho gudahooda ayuu madaxweynuhu kusoo magacaabayaa ra?iisuwasaare cusub. Baarlamaanku wuxuu ballan qaaday in uu ansixiyo Raisulwasaaraha cusub iyo xukuumadiisaba afar iyo toban maalmood gudohooda markii loo soo gudbiyo.
5- Dhismaha golaha wasiirada waa in la tixgeliyaa qaabka 4.5 waa in lagu dhisaa ruux wadatashi ay is aaminaad ku dhisantahay oo ay madaxda hay?adaha dawladu yeeshaan iyadoo ay xadidayso shaqooyinka hayad walba ugu tilmaaman Axdiga ku meel gaarka ah. Wasiiradu waa in noqdaaan kuwo aqoon, khibarad iyo hufnaan leh.
6- In Baarlamaanka iyo xukuumada cusub ay ka wada shaqeeyaan sidii loo meelmarin lahaa waajibaadka marxalada KMG ah, kuwaasoo ay ugu horayso Nabadgelyada, dhamaystirka dastuurka, diyaarinta doorashooyinka, dib u habaynta Baarlamaanka iyo xoojinta xiriirinta siyaasadeed iyo wadashaqaynta dadka Soomaaliyeed ee ay wax ka go?aan.
8- In la abuuro jawi ay wadashaqayn iyo iskaashi ku yeeshaan Baarlamaanka iyo xukuumada i taas loo xaqiijiyana waa in la joojiyaa dagaalka warbaahinta waana in aan mudo sanad ah mooshino laga keeni Karin Madaxweynaha, Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa.Sidoo kale waa in xukuumada laga keeni Karin mooshin aan sabab iyo daliil xoog badan ku dhisnayn, kaasoo ay ku khilaafayso Axdiga KMG.
10- In madaxda gobolka (IGAD iyo EAC) ay dhisaan hay?ad siyaasadeed oo ay kala shaqayn doonaan UNPOS iyo AU taasoo dabagasha waxqabadka iyo meelmarinta hawlaha lagu heshiiyey.